शिवम् सिमेन्टको कीर्ति समारोहमा यसरी हसाए डा. गुलाटिले
काडमाडौं पौष २३ भारतका हाँस्यकलाकार डा. गुलाटि अर्थात सुनिल ग्रोवरले नोपली दर्शकलाई मनोरन्जन दिएका छन । शिवम् सिमेन्टले आयोजना गरेको कीर्ति समारोह २०७४ को अवसरमा नेपाली दर्शक माझ आएका हुन । यसै समारोमा सिवम् सिमेन्टले आफ्ना उत्कृष्ट ६४ डिलर र नेपालभरिका ५०० डिलरलाई विभिन्न बिद्यामा अवार्डले सम्मानित गरेको थियो ।
कार्यक्रमा स्वस्तिमा खड्का, हेमन्त राना, कार्टुन क्रुज लगाएका नेपालका राष्ट्रिय कलाकारहरु समेतले प्रतुती दिएका थिए ।
उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै शिवम् सिमेन्टका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार गोएल ले आफ्ना सम्पूर्ण बिक्रेता तथा डिलरलाई शिव्म सिमेन्टलाई नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसिया कै नं. १ सिमेन्ट बनाउने बताए । त्यसै गरी उक्त कार्यक्रमका नेश्नल डाईमण्ड अवार्ड विजेता श्री सोहन मुरर्काले यस्तो कार्यक्रमहरुको आयोजनाले व्यवसायीहरुलाई थपउत्साहित बनाउने र भविष्यमा दिगो मेहनत गर्न प्रेरित गर्ने बताए ।